२०७४–चुनाव – Page 200 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
डा. केसीकाे १५ औं अनसन आजबाट
काठमाडौं । डा. केसी आज (शनिबार)बाट अनशन बस्ने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै स्वरूपमा तत्काल जारी गर्न माग गर्दै डा. केसी अनशन बस्न लागेका हुन् । उनको यो १५औँ अनशन हो । यसपटक डा. केसी जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बस्ने भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले भने डा. केसीलाई अनशन बस्न रोक लगाएको […]
गाई काटेर खाएको अभियोगमा (ने क पा)का कार्यकर्तालाई १२ बर्ष जेल सजाय
बाग्लुङ । गाई काटेर खाएको अभियोगमा नवगठित (ने क पा)का कार्यकर्तालाई १२ वर्ष जेल सजाय भएको छ । बाग्लुङको निर्वाचन क्षेत्र नंं. २ को ख तथा साविक बोबाङ गाविस वडा नं. ९ का ६ जना (ने क पा)का कार्यकर्तालाई गाई काटेर खाएको अभियोगमा जिल्ला अदालतले जेल सजायको फैसला गरेको हो । स्थानीय सुराकीको आधारमा गाई […]
काठमाडौं, असार १५ । नेपालमा केही वर्ष पहिलेदेखि असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रुपमा मनाउँदै आइएको छ । किसानहरुले पनि यसलाई आत्मसात् गरेर पर्वकै रुपमा मनाउँदै जाँदा यसले राष्ट्रव्यापी महत्व ग्रहण गर्दै गइरहेको पनि छ । मनसुनी वर्षाको आगमनसँगै खेत र बारीहरुमा रमाउने किसानहरुका लागि असार १५ साच्चिकै खुशीयालीको दिन पनि रहन्छ । ढिलाइ […]
सोलुखुम्बुमा भएको जीप दुर्घटनामा परी ७ जनाको मृत्यु
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुमा शुक्रबार बिहान भएको जीप दुर्घटना परी सात जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परी एकजना घाइते भएका छन् । सोलुखुम्बुबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको को १ ज १८६० नम्बरको जीप बिहान ८ बजे बरडाँडामा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा मृत्यु भएका सातै जनाको अहिलेसम्म नाम ठेगाना खुल्न सकेको छैन । जीपमा […]
दाहाल नभएको मौका पारी पेरिसडाँडा बिक्रि गरिँदै
काठमाडौं । दाहाल नभएको मौका पारी उनका भूतपूर्व मजदुर नेताहरुले पेरिसडाँडा बिक्रि गर्न चलखेल गरिरहेका छन् । तात्कालीन माओवादी केन्द्र एमालेलाई बुझाएपछि उत्पन्न तनाव र पत्नी सीता दाहालको उपचारको चिन्तासँगै यतिबेला (ने क पा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सिंगापुरमा छन् । (ने क पा) का एक उच्चस्तरीय नेताका अनुसार उनी त्यहाँ ‘रअ’का केही मान्छेहरुसँग मन्त्रणा […]
पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको ऐतिहासिकता
यही असार १२ गतेबाट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ । २०७४ असोजमा सम्पन्न पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछिको यो दोस्रो केन्द्रीय समितिको वैठक पार्टीप्रतिको कार्यकर्ता तथा जनताको आशावादमा देखिएको बृद्धिलाई क्रान्ति र परिवर्तनमा आवश्यक भौतिक शक्तिमा कसरी रुपान्तरण गर्ने र पार्टी बाहिरबाट आएका र आउन सक्ने अनगिन्ति चुनौतीहरुसित कसरी सामना गर्ने रणनीति विकासमा केन्द्रित रहने […]
धादिङमा गएको पहिरोमा परी पाँच जनाको मृत्यु, दुई जना बेपत्ता
धादिङ । धादिङको उत्तरी भेगमा पर्ने सत्यदेवी र मार्पाकमा गएको पहिरोमा परी पाँचजनाको मृत्यु भएको छ । गएराती गएको पहिरोमा परी दुईजना बेपत्ता भएका छन् । पहिरोले सात घर पुरिएको छ भने चारजना घाइते भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । दुई दिनदेखि परेको अवीरल वर्षाका कारण खनीयाबास गाउँपालिका–५ स्थित सत्यदेवीको साईश्वाँरामा गोले जेठा भनिने राजु […]
लिपुलेकको कुरा गर्ने बित्तिकै ओंठमुख सुकाउँछन् प्रधामन्त्री ओली
काठमाडौं । चीनबाट स्वदेश फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निल्नु न ओकल्नु भएको एउटै प्रश्न छ– ‘लिपुलेकका बारेमा चीन भ्रमणमा किन कुरा उठाइएन ?’ सीमा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित यो प्रश्न यसपालाको प्रमको भ्रमणमा उठ्नै पर्ने विषय थियो । किनकि लिपुलेक अतिक्रमण गरिएपछिको चीनमा भएको […]
क्रान्तिकारी माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक आजबाट सुरु हुँदै
काठमाडौं । नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा जुटिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय समितिको बैठक आजबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा सुरु हुँदैछ । विकसित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणसहित क्रान्तिको नयाँ रणनीति निर्माणमा क्रान्तिकारी माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा जुटेको हो । केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीका लागि पार्टीको स्थायी समिति र पोलिटव्यूरोको बैठक यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका […]
७५ हजार विद्यार्थी प्लस टु भर्ना हुनबाट बञ्चित, सरकारी प्राविधिक शिक्षालयहरु तुरन्त खोल
काठमाडौं, असार १२ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानो ठिमीद्वारा सार्वजनिक गरिएको एसईई परीक्षाको नतिजाले ७५ हजार विद्यार्थीलाई प्लस टु भर्ना हुनबाट बञ्चित गरेको छ । नियमित पठनपाठनबाट यति ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरुलाई बाहिर धकेले पछि देशको विकासको परिकल्पना नै गर्न असंभव हुन जान्छ । युवा विद्यार्थी भनेका भविष्यका कर्णधार हुन् । देशमा अवलम्बन गरिएको शिक्षा नीतिले […]